I-Ultrasonic Laboratory Devices - I-Hielscher Ultrasound Technology
Amadivaysi e-laboratory e-Hielscher ultrasonic ahlangene, alula ukusebenzisa futhi ahlukahlukene kakhulu. Zingasetshenziselwa ukucubungulwa kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo kanye nezinsizakalo ezinhlobonhlobo eziningi.
Izicelo ezijwayelekile zama-homogenizers e-ultrasonic zifaka phakathi ukulungiselela isampula, ukuhlakazeka kanye ne-cell lysis, i-homogenizing, ukusabalalisa nokuhlukanisa, ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana nokusheshisa kokuphendula kwamakhemikhali (sonochemistry). I-Hielscher inikeza ama-homogenizers amaningi e-ultrasonic okufanele asetshenziselwe lezi zinhlelo zokusebenza ezinhlotsheni eziningi ezivela ku-approx. 50µL kuya ku-2000mL. Ukukhethwa kweprosesa le-ultrasonic kuya ngevolumu yesampula ezonikezwa. Ithebula elingezansi, libala wonke amadivayisi elebhu kanye nevolumu enconyiwe ngokulandelana.
I-VialTweeter ku-UP200St 200 26 ukuma 0.5 – 1.5
UP200St_TD nge-SonoStep 200 26 ukuma 30 – 500
I-ultrasonic cuphorn 200 26 I-CupHorn, i-sonoreactor 10 – 200
UIS250L 250 24 laboratory uhlelo sieving
Amadivayisi elebhu ye-Hielscher ultrasonic enzelwe ilebhu. Zilula kakhulu ukusetha. Amadivayisi aphathwayo kanye nama-stand-mounted ahlanganisa i-ultrasonic generator (ugesi) kanye ne-transducer (isiguquli) endlini eyodwa. Lokhu konga isikhala sedeskithophu nesisindo. I-Hielscher ukuphela komkhiqizi wamaprosesa aphathwayo aphathwayo. Okuwukuphela kwepulagi okufanele lixhunywe ipulagi enkulu yamandla, elingana nezitolo ezijwayelekile eziyi-115V ~ noma ezingama-230V ~. Ukusebenza kwama-homogenizers e-ultrasonic kulula kakhulu. Amadivayisi aqondiswe kumvamisa we-resonant elilungile ngokuzenzekelayo, ngakho-ke asikho isidingo sokulungiswa mathupha. I-amplitude ye-ultrasonic iyashintsha kusuka ku-20 kuye ku-100%. Ngenye indlela ekusebenzeni okuqhubekayo umjikelezo wokuqhuma okukhulu kwe-sonication ungalungiswa, isb ukwenziwa kwezicubu ezizwela ukushisa.
Ukunemba kokuthola imiphumela ephindaphindiwe
Ukuze kulungiselelwe amasampuli kanye nokuthuthukiswa kwezicelo ezintsha, kubalulekile ukuthi ube nokulawula okuhle kuzo zonke izilinganiso zomsindo ukuze uthole imiphumela yokukhiqiza. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic akuvumela ukuthi ulawule ukuphakama kwe-sonication. Lona ipharamitha ye-sonication ebaluleke kunazo zonke. I-amplitude yemishini ihlolwe ngaso sonke isikhathi kudivayisi ukuze kuqedwe noma yikuphi ukuphambuka kusuka kunani elilungisiwe. Lokhu kwenza ukuphakama okuzimele kwezinye izici, njengokujula ukujula, ukushisa kwamanzi noma i-viscosity. Ngakho-ke, ungaphinda uvuselele indodana ngayinye ngokukhetha i-amplitude efanayo.
I-Probe-type ultrasonicator UP200St
Ama-Reactors e-Cell Cell Flow for Processing Larger Volume
Amadivayisi e-Hielscher ultrasonic laboratory angasebenza ngokuqhubekayo ngaphandle kokushisa ngokweqile. Ngokusebenzisa amadivayisi elebhu ngokuhlangana nama-flow cell reactors, ungacubungula amanani wesampula amakhulu. Kulokhu, lolu ketshezi ludonswa ku-reactor eyenziwe ngengilazi noma insimbi engagqwali. Isibonelo, i-UP400St ingacubungula i-approx. Amalitha ayi-10 kuye kwangama-50 ngehora. Lapho, ivezwa ekuchazweni okuningiliziwe kwe-sonication ngaphambi kokuba ifinyelele ekuphumeni kweseli ophendulayo. Ukuze kupholise izinto ezizwela ukushisa ngesikhathi se-sonication, amaseli wokugeleza afakwa ijazi ukuze kuthuthukiswe ukushabalalisa ukushisa.
Amabhokisi okuvikela omsindo wokunciphisa umsindo
Uma isetshenziselwa uketshezi, i-ultrasound ibangela i-cavitation. Umsindo wokucabangela usezingeni elizwakalayo lomuntu. Amabhokisi okuvikelwa komsindo atholakala kumadivayisi we-laboratory e-ultrasonic ukunciphisa ukukhishwa komsindo emazingeni alula kakhulu. Lokhu kunconywa ezindaweni ezijwayelekile zelabhuthrikhi. Amabhokisi okuvikelwa komsindo afaka isikhala sokuma kanye netafula eliguquguqukayo (ingilazi ye-acrylic) ukubamba isampula. Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokukhishwa kwengxolo ye-ultrasonic!